Minyengetero 20 Inonongedza Pakashata Vatezvara | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 20 Yekunamata Kunongedzera Kune Akaipa Tezvara
20 Yekunamata Kunongedzera Kune Akaipa Tezvara
Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi kupesana nevakuwasha. Uku kunetsa kukuru kune vakawanda vakaroora vanhu. Hapana kupokana kuti vamwe vatezvara vakazara nehuipi, ndivo vamiriri verima. Vanozonetesa hupenyu hwemurume nemukadzi. Uchasangana nematambudziko akakura, panyama uye pamweya.
Makore angu mushumiro akandiita kuti ndisangane nezvinhu zvakawanda kunyanya nezvevakuwasha vakaipa. Zvinogona kukonzera kubatikana, kusanzwisisana pakati pevakaroorana kuti vaparadze wanano. Kurwiswa kwavo kunowanzova pawanano, havadi kuti mubatanidzwa umire saka vanozokonzeresa kutambura pane vanhu vaviri vanosanganisira mumubatanidzwa. Asi ini ndinounza nhau yakanaka kwauri nhasi, Mwari vakavimbisa kusunungura vanhu kubva pasimba remadzitezvara anokonzera kutambura pawanano yavo.
muchato isangano raIshe, ndosaka rugwaro rwuchitaura zvakabatanidzwa naMwari, ngaparege kuva nemunhu unoparadzanisa. Ndinotema nesimba remudenga, murume kana mukadzi akashata wese wauinaye mukuwasha aparadzwa nhasi zita raJesu. Ndinoraira muzita raJesu, masimba avo ave kushaya simba nhasi, museve wavakatumira mumuchato wako unodzokera kwavari zvakapetwa kanomwe muzita raJesu.
Ishe, ndinokukudzai nokuda kwokunaka kwenyu netsitsi dzenyu pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nenyasha dzenyu nenyasha kuva nemhuri yangu, ndinoti zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Tenzi, ndinonamata kuti munyaradze murume wese akasimba kana mukadzi pakati pavatezvara vangu avo vakapika kukonzeresa muchato uyu nekushungurudza nemarwadzo muzita raJesu.
Ishe, ini ndinosimudza mwero unopesana neese anonyengera vatezvara anoonekwa seshamwari asi akaipa murima. Ndinoraira kuti vaparadzwa muzita raJesu.
Baba, ndinotaura kuti vese vanondivenga pasina chikonzero pakati pavatezvara vangu, ishe, nyadzi dzamwari ngadziuye pavari nhasi muzita raJesu.
Tenzi, vatezvara vese vari kunditora mumba memurume wangu, ngavatambire kunyadziswa kwaMwari nhasi muzita raJesu.
Ishe simukai vavengi venyu vapararire, ngavanyadziswe nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, miseve yose yakaipa yakapfurwa pandiri kubva kuna vatezvara vakaipa inodzokera kwavari mumapoka manomwe muzita raJesu.
Tenzi, ndinonamata kuti pamusoro pemhuri yangu, rairo yako yega inomira muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Mwari asina kuraira. Kusvika parizvino, ini ndinopisa rurimi rwese rwakaipa kutaura zvakaipa pamusoro pemubatanidzwa uyu nhasi muzita raJesu.
Tenzi, ndinonamata kuti kutsiva kwashe kusimukire kune vese vatezvara vakaipa vasingade chero kufa kwangu, muzita rine simba raJesu.
Ishe, ndinokumbira kuti mutumwa washe akwire mbiru dzemoto kutenderedza roorano iyi nemweya yese iri mukati mayo. Ndinonamata kuti dziviriro yashe ive pamusoro pangu nemumba mangu muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, Uyo anogara munzvimbo yakavanda yeWekumusoro-soro, achagara pasi pemumvuri weWemasimbaose. Ini ndinozviisa ini nemhuri pasi pechivande cheWekumusoro-soro, hapana chakaipa chingatiwira muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti neimwe nzira moyo wemurume wangu waiswa chepfu kupokana nemubatanidzwa uyu, ndinonamata kuti murape nhasi muzita raJesu. Ndinoraira kuti chese chikamu chisina kubatana mumuchato uyu chakagadziriswa muzita raJesu.
Ishe, ndinotuka nyoka dzese nezvimwe zvisikwa zvemadhimoni zvakatumirwa nevakuwasha vangu kuti vandishungurudze ndivete, ndinopa chirevo kuti varege kuva nesimba pamusoro pangu muzita raJesu.
Iwe imbwa yezvakaipa yakatumirwa nevakuwasha vakaipa kuti vandirume kuhope, rasa mazino nhasi muzita raJesu. Ndinokutuka nyoka yekuziva yakapinda mumuchato wangu muzita raJesu. Ndinoraira kuti ubvise maoko ako pamusoro pemubatanidzwa wangu. Imba iyi nevagari vayo vari pasi pekudzivirirwa naIshe, buda pamba apa nhasi muzita raJesu.
Ishe, zvese zvinokonzeresa kutya kuti mukuwasha ari kushandisa kwandiri, kufa nhasi muzita raJesu. Handingatyi nekuti zvakanyorwa, handina kupihwa mweya wekutya asi weSonship kuchema Ahba baba. Ndinoraira nemvumo yedenga, iwe mumiriri wekutya kurasikirwa nesimba rako pamusoro pangu muzita raJesu.
Ishe, ndinonamatira nhovo yemweya pakurwisa kwemukuwasha wangu akaipa. Matambudziko avo ese pamuchato uyu akatyorwa nesimba redenga. Ndinoraira nesimba muzita raJesu, iwe mweya wekuzivisa wakatumirwa kubva muchibvumirano chevaroyi mumhuri yangu, siya hupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Zvirwere nezvirwere zvese zvine njodzi zvakagadzirwa kutambudza hupenyu hwangu, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, uyo akasunungurwa nemwanakomana akasununguka zvirokwazvo. Ndinoraira nemunyori wedenga, cheni dzese dzehuranda dzave kushandiswa kundibata, ndinoraira kuti wadamburwa nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinoraira kuti vana vangu vasununguke kubva pazvisungo zvevatezvara vakaipa vachinditambudza muzita raJesu. Chinyorwa chinoti vana vangu neni tiri vezviratidzo nezvishamiso. Ndinoraira kuti vatezvara vakaipa havazove nesimba pamusoro pevana vangu muzita raJesu.
Baba ishe, ndinonamata kubva nhasi muchaita kuti ini nemurume wangu tisabatike kumasimba ese evakuwasha mukuedza kutambudza mhuri yangu muzita raJesu.
Previous nyayaZvikonzero zvishanu Unofanirwa Kurera Vana Vanotya
inoteveraYakasimba Minyengetero Inonongedzera Kupokana Nepamuviri Matambudziko
Bhaibheri Rezuva Ranhasi 2nd Nyamavhuvhu 2018